GroupSolver: Leverage AI sy NLP amin'ny fikarohana eny an-tsena | Martech Zone
Zoma, Oktobra 30, 2020 Zoma, Oktobra 30, 2020 Douglas Karr
Raha efa namorona fanadihadiana ianao ary nanantena ny hanana valiny marimarina sy ara-pahalalana avy amin'ireo valiny, dia azonao tsara fa sarotra ny milaza ireo fanontaniana. Ny verbiage, ny firafitra ary ny fitsipi-pitenenana angatahinao dia mety hiteraka valiny izay hivily lalana amin'ny fikarohana nataonao.
Amin'ny maha mpitantana ny vokatra ahy dia matetika no nifaneraserako tamin'ireo vondrona mifantoka. Raha manandrana interface vaovao momba ny mpampiasa aho, ny fangatahana valiny dia mety hahatonga ilay mandray handinika ilay interface mba hanandrana sy hahita zavatra tsy mety… na eo aza ny mety ho famolavolana azy tsara. Raha manontany aho raha misy zavatra sarotra na misy zavatra tsy ampy dia mitady olana eo noho eo ny mpampiasa… izay mety tsy misy.
Fa kosa, nangataka tamin'ny mpampiasa fotsiny izahay mba handray andraikitra ary avy eo milazalaza ny fomba nataon'izy ireo momba ilay hetsika. Na dia nanala ny fitongilanana aza izany dia nitaky famakafakana lahatsoratra marobe mba hamaritana ny valiny ho tombatombana na tolo-kevitra kalitao. Ireo valiny ireo dia matetika no tombantombana tsara indrindra… Tsy a fehin-kevitra manan-kery momba ny statistika.
Fomba fanodinana fiteny voajanahary sy fianarana milina
Ny sasany amin'ireo fahitana manankarena indrindra manova indrindra dia avy amin'ny fametrahana fanontaniana misokatra. Nahoana dia ohatra tonga lafatra. Fa ny valiny Nahoana Tsy valin'ny isa, binary, na safidy… ka sarotra foana ny nahazo ny valiny isa sy kalitao ilainao amin'ny fametrahana fanontaniana misokatra hamaritana ny fanapahan-kevitry ny orinasa.
Soa ihany Ny fanodinana fiteny voajanahary (NLP) ary fianarana milina (ML) afaka mandresy ireo olana ireo! Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fianarana milina amin'ny faharanitan-bahoaka, GroupSolver dia sehatry ny teknolojia fikarohana eny an-tsena izay mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hanontany sy hanamafisana ireo fanontaniana qualitative ary koa qualitative amin'ny fanadihadiana an-tserasera.
Topimaso momba ny GroupSolver
Ny GroupSolver dia mifanelanelana amin'ireo sehatra natao-ho-anao, toa ny Survey Monkey sy Google Surveys, ary ireo orinasa mpikaroka momba ny asa fanompoana feno, toa ny McKinsey & Company sy Accenture.
Ny mampiavaka ny GroupSolver dia ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny fanodinana valiny amin'ny fiteny voajanahary, amin'ny alàlan'ny:
Fahalalana olona - Ny valiny dia mamaly ireo fanontaniana mivelatra amin'ny teniny avy, avy eo izy ireo dia miara-miasa.
Machine Learning - Ny valiny avy amin'ireo fanontaniana misokatra dia novolavolain'ny algorithm mavitrika sy mandamina ny tena.
Antontan'isa mandroso - manamarina ny valiny amin'ny fiteny voajanahary ny sehatra ary manisa ny fahitana qualitative.
ToolsSolver Tools Anisan'izany
AI Open Answers ™ - Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fianarana ny milina sy ny faharanitan-tsaina ataon'ny vahoaka, ny GroupSolver dia mandamina sy mamaritra ny valiny malalaka. Tsy mila fampiofanana momba ny angona, tsy misy olona mahay mandanjalanja, ary tsy mila fakan-tsoratra an-tsoratra maimaimpoana.
IdeaCluster ™ - IdeaCluster dia mampiseho fifandraisana misy eo amin'ny valiny misokatra malalaka. Mahasoa tokoa rehefa manangana personas ny mpanjifa na milaza tantara marika. Marina izany - ny ModelSolver dia nanafaka ny maodely mifandraika sy miverina amin'ny fifandraisana manokana amin'ny angon-drakitra isa.
IntelliSegment ™ - IntelliSegment dia fitaovana fizarazaran-tsaina manan-tsaina izay afaka manampy anao hahatakatra ny tsy fitovian'ny valiny amin'ny fanontaniana misokatra ho an'ny ampahan'ny mpamaly manokana. Toy ny mahita tantara ao anaty vala-bozaka.
IdeaCloud ™ - IdeaCloud dia fampisehoana an-tsokosoko sy laharam-pahamehana ny valiny tohana indrindra amin'ilay fanontaniana misokatra. Ny endri-tsoratra lehibe kokoa dia midika valiny miaraka amin'ny fanohanan'ny mpamaly ambony. Ny endri-tsoratra kely kokoa dia……, valiny izay tsy nahavitana azy tsara.
Vahaolana marimaritra iraisana ™ - Vahaolana marimaritra iraisana dia andian-valiny tena tohana izay mifandraika tsara. Mampiseho valiny mifanaraka tsara izany ary mandrafitra ny fifanarahana marimaritra iraisana eo amin'ireo mpamaly.
Valiny safidy - Ankoatry ny maha mofo sy dibera ny fikarohana amin'ny fanadihadiana, ny valin'ny fanontaniana safidy maro dia mety hanampy amin'ny fananganana ampahan'ny mpamaly hahalala bebe kokoa. Izahay dia mitazona azy ireo ho vaovao sy havaozina amin'ny fotoana tena izy.
Mpanafatra data - Raha efa nanangona fampahalalana momba ireo olona navalinao ianao dia azonao atao ny mampakatra azy amin'ny takelaka misy anay. Ampiasao io hanapahana ny angona GroupSolver na hananganana fizarana mpamaly vaovao.
Mpanoratra valiny - Jereo hoe ahoana no hamalian'ny mpamaly ny fanontanianao amin'ny fotoana tena izy. Vondron'izy ireo ary hamerena azy ireo amin'ny tsindry bokotra iray. Matoky ny masininay izahay, fa ny angona indraindray mila fikasihan'ny olona malefaka.
Data Downloader - Manondrà angona tahiry ho an'ny fanadihadiana bebe kokoa miaraka amin'ireo rindrambaiko statistika mahazatra toy ny SPSS, R, na Excel.
Ny tabilao hita maso an'ny GroupSolver dia ahafahan'ny mpampiasa mijery sy miasa amin'ny fahitanao azy. Ny data dia voahodina sy havaozina satria angonina, mba hahafahanao mijery mialoha ny valiny amin'ny fotoana rehetra.
Mangataha Demo Groupsolver
Tags: aifahaizana artifisialyGroupsolvertsena fikarohanasehatra fikarohana eny an-tsenamlNy fanodinana fiteny voajanaharynlp